Indlela yokuchonga uhlobo lobunji bomzimba kunye nemeko yezipikili?
Ukuze ufunde uhlobo lomntu, akufuneki ukuba uye kumcebisi, kunele ukujonga ezandleni zakhe. Amagama angakhohlisa, kodwa izandla zabo azikhohlisi. Ngoko yintoni esinokusixelela ngezandla zomnxibelelwano? Masiqwalasele umlo wezipikili.
Uhlobo olujikelezayo lwezipikili
Ubume obujikelezayo (okanye oval) besikhonkwane zingabonisa ukuba sinemvakalelo kakhulu phambi kwethu, bahlala bevakalelwa. Bazakhele imithetho kwaye bazame ukuhlala ngokuchanekileyo kubo, bahlale bekholelwa kwiminqweno yabo. Abantu abanalolu hlobo lwezipikili abayinyamezeli nangona kubonakaliswa kancinci. Ngokweengcali ezisegqithini lamasundu, abalondolozi bokuthula babalaseleyo kubantu abanjalo.
Ukuba phakathi kweendawo zakho ezikufutshane uza kuqaphela umntu onalolu hlobo lwezipikili, wazi, phambi kwakho kwendalo. Iingcali zithi ziyi-fashion designers, i-sculptors, abaculi kunye neemvumi zababhinqa abadibanisa izipikili zabo kwifom ekhonjiweyo yezipikili. Abantu abanjalo abanengqondo engaqhelekanga, bayaphupha, baqulunqa, banomdla ngehlabathi, bathanda inkululeko kwaye bahlala bekulangazelela, abanomdla kunye nesineke. Bakhawuleza kwaye bathabathe ngokukhawuleza. Abantu abanjalo bayathinteka, oko kuthetha ukuba abantu abanjalo basengozini kakhulu. Akukho butyebi behlabathi lunokuqhathaniswa nexabiso lokomoya - le ndawo ebalulekileyo yabantu abaneefayili ezicacileyo.
Ubunzima beemigodi eziqhelekileyo
Ngokumalunga nabantu abanolu hlobo lweempiki banokuthiwa bahamba phambili. Iimpawu eziphambili zabantu abanjalo ziphezulu, ukuthobeka, i-naivete, ithemba, ukuvuleka kwemvakalelo, ububele. Aba bantu bathambekele ekuthandeleni izinto kunye nabo bonke abantu. Nangona baxhomekeka kwixesha elizayo, yonke into abayifunayo, baqhele ukufikelela ngokuzimeleyo kwaye bathembele kuphela kumandla abo, inkxaso yabo ayifuni. Njengoko sele sichazile, abantu abaneenxande zeekhonkwane banamathemba kwaye banamava, ngoko ke abantu babo abangathembeki badla ngokukhohlisa.
Uhlobo lwezithuba zepara
Aba bantu banobuqili, besazibuza, baqonda kwaye banamathele. Ininzi yabo bonke ebomini abantu abanjalo baxabisa umyalelo. Kuzo zonke iimpumelelo okanye ukuhluleka ziphathwa ngefilosofi. Njengoko iingcali zithi, izikhonkwane ezinemibala ebonisa ukuba sinabantu abaneengqondo ezilawula iingqondo. Ubomi bomntu kunye nomsebenzi abantu abanjalo bathembela kuphela kwiingqondo zabo baze bangaze bazive ngeentliziyo zabo. Yiyo le mpawu ekhokelela abantu abanjalo kwiinkokeli, baba yizinto ezixhasayo, ezinenjongo, eziqhubekayo nezizinzileyo. Bazimeleyo kwaye banesibindi. Nangona kunjalo, lo ngumfanekiso wangaphandle womntu onjalo, ilizwe eliphakathi lizele ukuphikisana, entliziyweni yabo bahlala bejamelene. Bamahlala benika iingcebiso ezilungileyo, nabani na ocela icebiso, kodwa abazincedi ngokwabo.
Ukuqhubeka nesihloko, masiqhubekele kwixesha lezipikili. Ngoko ke, ukuba umnxibelelwano wakho udelele iikhonkwane, kuthetha ukuba sinenkokheli kuzo zonke iziganeko. Musa ukucebisa ukuba uxubushe nabantu abanjalo-ixesha lokuchitha ixesha, amandla kunye neentliziyo.
Abasetyhini abaneempumlo ezimfutshane banokungabaza. Bayazibuza, bahlala bengathembeki kwaye benenkani. Ukukholisa loo ntokazi ukuba kuchithe ixesha.
Ukuba ubude beethonkwane buphakathi, oku kubonisa ukuba lo mfazi unothando kwaye uyathambile, unokuphila neminye imithetho yabantu.
Ukwenza umfanekiso opheleleyo wowesifazane, kuyafaneleka ukuba uqaphele umbala we-varnish ekhethiweyo.
Ukuba sibona izandla zamantombazana kunye nezipikili ezide, ezihlotswe ngamatye kunye nephethini, ngoko sinomfazi ovelele. Abafazi abanjalo bayazinikela kwiimvakalelo, iingcamango kunye nobuchule.
Ukuba imibala engabonakaliyo neyokuzolalisa i-varnish ikhethwa ukuba i-manicure, ke le ntombi ibonwabile, njengowesifazane.
Ubungakanani obuphakathi kwezikhonkwane ezineembonkethi yeklasi ngumpawu kumantombazana athambileyo kwaye athule. Ngokutsho kweengcali, abanini be-manicure ekugqibeleni bayakwazi ukunqoba ingqondo, kwaye injongo iya kufezwa kuyo nayiphi na imeko, kungakhathaliseki ukuba bunjani ubunzima.
Iitoni zomntu ezichanekileyo zikhethwe ngabasetyhini ababonakalisa ukuzola nokuzithemba, abayithandi imimangaliso, kodwa bakhetha ukuqikelela kwangaphambili kwimeko.
Ukuba abafazi abancinci abasebenzisi i-lacquer kuwo onke, ngoko kuthiwa baxabiseke kakhulu kumntu womntu kwaye abakholelwa ngokwabo ngokwaneleyo.
Ukuba uthengiswa: iindlela zokujamelana noxinzelelo
Ukuxolela zonke izikhalazo kunye nokwesaba komzali
Kudibene kwipropati enye, njani ukuba khona?
Iimfihlelo zobuhle kunye nobulili
Indlela yokwakha ubudlelwane nabazali bomfana
Indlela yokuthetha nomntu onenkani?
Kwindleko yohlwaya yabafundi bezikolo
Umyeni washiya. Ungayibuyisela njani?
Imozulu eMoscow nakummandla waseMoscow ngoMatshi 2017 - i-Forecast kwi-Hydrometeorological Centre
Ukusetyenziswa kokuhlamba kwimpilo
Bruises phantsi kwamehlo? Siya kulahla izigulane zabantu
Amakhowe e-Honey kwiKorea
Yintoni enokuyinika indoda
I-Curd cake nge-blueberries
I-barwich yebhayiki yengulube
Indlela yokucwangcisa ukukhulelwa kwangaphambili yinkwenkwana
U-Yana Rudkovskaya utshitshisile "intando yesininzi" kwimpahla yabantwana
Ukupheka isobho esimnandi sesonka
Iifoto - ihlabathi lenene
I-Spaghetti ene pesto kunye ne-mozzarella sauce